Xasarad Xoogan oo ka Jirta Degaanka Canfarta – Rasaasa News
Jijiga, Apr 26, 2014 – Xasarado xoogan ayaa ka dhex taagan shacabka Canfarta iyo dawlada dhexe ee EPRDF, xasaradan fiday waxay ka bilaabatay xadhig falal iyo cabudhis uu Booliska dawlada dhexe u gaystay shacab Canfarta.
Qulqulatooyinkan ayaa ka bilowday magaalada Awaasha oo 160 KM u jirta Addis ababa April 20, 2014. Sida la sheegay waxaa jira toban ruux oo shacab ah oo ay toogteen ciidanka federalku. Banaanbax saacado socda ayaa xidhay jidka laamiga ah ee isku xidha Addis Ababa iyo Jabuuti, iyaga ka cabanaya weerarda budhcadu kaga dhacayso xoolaha nool. Sida la sheegay Booliska federalka ayaa qayb ka ah dhaca xoolaha nool, kuwaas qaadi waayey dacwado ay shacabku geeyeen.
Taliyaha ciidanka Atoobiya general Samore ayaa gaadhay Awaasha, isaga oo wada xaajood la galay mudaharaadayaasha, kana balan qaaday in maxkamad la keeni xubnaha Booliska federalka ee masuulka ka ah cadaadinta shacabka iyo waliba in uu wax ka qabanayo nabadgaliyada degaanka Canfarta.
Magaalada Awaasha iyo tuulooyinka u dhaw waxaa la keenay ciidamo badan oo gurmad ah, kuwaas oo la dhigay dariiqyada magaalada. Waxaa la sugayaa in uu dhaco wadahadal dhex mara dawlada dhexe ee Atoobiya iyo odayaasha dhaqanka ee degaanka Canfarta, si xaalada loo dajiyo.
Dhinaca kale waxaa April 23, 24, 25 mudaharaadka iyo shaqaaqooyinka ku soo biiray Ardayda Iskuulada, Kuleejka Faya dhawrka, Ardayada Jaamacada Samaara iyo dadwaynaha degan caasimada, iyaga oo ka cadhaysan sida ay dawlada federalku ula dhaqanto shacabka Awaasha. Boqolaal ka mid ah dadka banaan baxaya ayaa xabsiga la dhigay.
Abebe Worku oo u hadlayey booliska ayaa inkiray dilka ay boolisku gaysteen, isaga oo sheegay in ayna dhibaato jirin April 21, arintaas oo kicisay cadhada shacabka Canfarta.
Magaalada Awaasha ayaa bandoo la galiyey, iyada oo ay dawladu ka cabsi qabto in arintan meelo kale laggaga faa,iidaysto. waxaana la filayaa in ay dood adag dhex marto dawlada dhexe iyo Odayaasha iyo wax garadka Canfarta.